विदेशीहरु शान्तिको साथ बस्न सक्ने देश जापान | Japan Care Worker Guide
नर्सिङ्ग केयरको काम
निर्दिष्ट सीप प्रणाली
विदेशीहरु शान्तिको साथ बस्न सक्ने देश जापान
जापान प्राय सुरक्षित देशको रुपमा चिनिन्छ निसन्देह,जुन २०२० मा जारी गरिएको विश्व शान्ती सूचान्कमा जापान नवौ स्थानमा छ  र प्रमुख विकसित देशहरु मध्धे क्यानाडा पछि दोस्रो उच्च स्थानमा रहेको छ । जापानमा बन्दुक, तरवार जस्ता हाथहथियारहरुको नियन्त्रण गर्नको लागी कडा कानून भएकोले कसैले पनि बन्दुक वा तरवार जस्ता हतियार बोकेर हिड्दैनन (अवश्य पनि, कम्मरमा तरवार बोकेका सामुराई पनि हुँदैनन्) । हामीले, जापानमा काम गरेको अनुभव भएका विदेशी नागरिकहरुलाई प्रश्न पत्र र अन्तरवार्ताबाट जापानको जीवनको सन्दर्भमा सोधेका छौं।
 Global Peace Index © Institute for Economics and Peace
जापानमा रातीको समयमा बाहीर जानु कतिको सुरक्षित छ ?
नेपालबाट आउनुभएका Mr. Mani Gyawali जो ओइता प्रिफेक्चरमा काम गर्नुहुन्थ्यो . उहाँले भन्नुहुन्छ “म बसेको शहर एकदमै सुरक्षित थियो । अफिसको काम अथवा अन्य व्यक्तिगत कामका लागि दिउँसो होस वा राती जुन सुकै समयमा पनि जान सक्थे । मेरो देशको तुलनामा जापान धेरै शान्त र सुरक्षित देश हो” । अर्कोतर्फ फिलिपिन्सबाट आउनुभएका Ms.Annie भन्नुहुन्छ “मेरो देश फिलिपिन्सको तुलनामा जापानको रातीको समय एकदमै सुरक्षित छ । तर, अलिकती डरलाग्दो अनुभव पनि गरे । ’cause जब म डाउन टाउनमा थिए, त्यसबेला रक्सिमा मात्तिएको एकजना मानीसले मलाई बोलाएको थियो” ।
मङ्गोलियाबाट भर्खरै जापानमा आउनुभएका Ms.Batgerel Ariungerel ले भन्नुहुन्छ, “जापान एकदम स्वच्छ र सुरक्षित देश भनेर सोचेको थिए तर, जब म जापान आइपुगेर समाचारहरु हेर्थे त्यसमा आपराधिक घटना र दुर्घटनाका समाचार मात्रै हुने गर्थे, त्यसैले थोरै मात्रामा म चिन्तित भएको थिए” ।
जापान एकदमै सुरक्षित देश हो भन्नेमा कुनै शंका छैन, तर पनि रातीको समय शहरमा महिलाहरु एक्लै बाहिर नजाँदा राम्रो हुन्छ ।
शहरहरु कति को सफा छन ?
जब विदेशी नागरिकहरु पहिलो पटक जापानमा आउँदछन्, सबैजना बाटोमा गुडिरहेका सफा र सुन्दर कार देखेर चकित भएको देखिन्छ । रेल र बस लगाएतका सबै सार्बजनीक सवारी साधनहरु निकै सफा हुन्छन र लगभग कतैपनि फोहोरोमैला खसेको हुँदैन। “जापानमा फोहोरोमैला ब्यवस्थापन गर्ने तरिका र शहरहरु सधै स्वच्छ र सफा देखेर म संधै अचम्मित हुन्थे । त्यसैगरी सबै सार्बजनिक पार्कहरुमा शौचालय र पानी खाने ठाउ (धाराको पानी) देखेर एकदमै छक्क हुन्थे । जापानिजहरु शिष्टाचार र आफ्नो चालचलनमा संधै सचेत हुने रहेछन भन्ने कुरा बुझ्न सकें” । नेपालबाट आउनुभएका Mr.Mani Gyawali ले भन्नु भयो।
तर पनि शौचालय लगायतका स्थानहरु सधैसफा हुन्छन भन्ने कुरामा ब्यक्ती अनुसार फरक धारणा रहेका छन। सपिङ्गमल र डिपार्ट्मेन्टल स्टोरहरुका शौचालय एकदमै सफा छन। यद्दपि, सार्बजनीक स्थानका शौचालयहरु खासै सफा हुदैनन् । स्टेशनहरुका शौचलयहरु गन्हाउने अवस्थमा पनि हुन्छन भन्ने विदेशी नागरिकहरु पनि छन । यो भनिन्छ कि जापानी नागरिकहरुमा राम्रोबानी, चालचलन र नियमहरु पालाना गर्ने राष्ट्रिय चरित्र छ । त्यसकारण जापानका शहरहरु सधै सफा र स्वच्छ अवस्थामा हुने भएकोले असहज महसुस कहिले पनि हुँदैन। तर अर्कोतर्फ, पहिलो पटक जापानमा आउने विदेशी नागरिकहरुले यहाँका नियमहरु सजिलै बुझ्न नसक्ने समस्या
इन्डोनेसियाबाट जापान आउनु भएकी Ms.Riswanti भन्नुहुन्छ, “जापानमा पालना गर्नुपर्ने नियम कानूनहरु धेरै भएकोले एक-एक गरेर अध्ययन गर्दा राम्रो हुन्छ” ।
आफ्नो देशको तुलनामा मुल्य कस्तो छ ?
जापानको मुल्यको सन्दर्भमा, सस्तो छ वा महङ्गो छ सजिलै भन्न गार्हो छ । तर दक्षिण पूर्वी एसियाली देशहरुको तुलनामा यहाँको बजार मुल्य सामान्यतया महङ्गो छ भन्ने गरिन्छ । जापानमा बस्नुहुने फिलिपिन्सकी Ms. Annie भन्नुहुन्छ,”फिलिपिन्सको बजार मुल्य सस्तो छ । जापानमा तराकारी, फलफूल ट्याक्सी भाडा, पिजा महङ्गो छ । तर, तलब पनि धेरै पाइन्छ । बिजुली र पानीको मुल्य भने फिलिपिन्स भन्दा सस्तो लाग्छ । अस्पतालबाट सिफारीश गरिएका औषधी खरिद गर्दा जापानको नेशनल हेल्थ इन्सुरेन्स (विमा) प्रयोग गर्न सकिने भएकोले कम मुल्यमा औषधी प्राप्त गर्न सकिन्छ” ।
त्यसैगरी जापानमा लामो समय बसोबास गर्नुभएका नेपालका Mr.Mani Gyawali भन्नुहुन्छ, “जापानमा आउंदा बित्तिकैको समयमा यहाँको बजार मुल्य देखेर एकदमै चकित परेको थिए । जस्तै १० किलो चामलको मुल्य मेरो देशको भन्दा ५ गुणा महङ्गो थियो । तर जापानको जीवनशैलीमा घुलमील भएपछि महङ्गो महसुस हुन छोड्यो । ’cause बजार मुल्य उच्च भयेपनि काम गरेर प्राप्त गरिने तलब पनि धेरै हुने रहेछ । हुनसक्छ भर्खर जापान आउने जो कोहीलाई पनि मलाई जस्तै यहाँको बजार मुल्य महङ्गो महसुस हुनसक्छ” ।
अर्कोतर्फ, यो तथ्य पनि छ कि जापानमा हालैका दशकहरुमा खासै मुल्य वृद्धी भएको छैन । “म मङ्गोलिया फर्केको ६ वर्ष पछी फेरी जापानमा गएको थिए, त्यतिखेर म एकदमै अचम्मित परे, ’cause मैले ६ वर्ष पहिले सधैखाने गरेका ब्रेड, आइसक्रिम, रामेन (जापनिज नुडल्स), सोडा इत्यादिको मुल्य ६ वर्षपछी पनी खासै बढेको थिएन । जापानको मुद्रास्फीती दर मङ्गोलिया भन्दा न्युन छ, त्येसैले यहाँ पैसाको योजना वा ब्यवस्थापन गर्न धेरै सजिलो छ” । मङ्गोलियाका एकजनाले आफ्नो अनुभव सुनाउनु भयो ।
अहिलेको समयमा इन्टरनेट जस्ता माध्यमबाट हरेक चिजहरुको मुल्य सजिलै जान्न सकिन्छ । तपाईहरु जापान आउनु भन्दा अघी दैनिक आवश्कताका बस्तुहरुको मुल्य चेक गर्दा राम्रो हुन्छ । जापानमा आउनको लागि पैसाको तयारी वा बस्ने खर्चको पूर्वयोजना गर्ने कुराहरु धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
आवश्यक सामग्रीहरु पाउन सक्नु हुन्छ ?
पहिलो पटक नयाँस्थान वा वातावरणमा बसोबास गर्नुपर्दा दैनिक खानेकुराको सन्दर्भमा चिन्ता लाग्न सक्छ । आफ्नो देशमा दैनिक प्रयोग गरिने खाद्द्य सामाग्री र मसला जस्ता बस्तुहरु पाउन सकिन्छ, कुन ठाउँमा पाउन सकिन्छ, लगायतका कुरामा तपाईहरुलाई चिन्ता लाग्न सक्छ । वास्तवमा जापानमा भने विभिन्न प्रकारका खाद्दय पदार्थ उपलब्ध छन । विभिन्न प्रकारका खाद्दय सामाग्री सजिलै पाउन सकिन्छ र धेरै प्रकारका रेस्टुरेन्ट पनि भएकोले विभिन्न परिकारका खानाहरुको आनन्द लिनपनि सक्नुहुन्छ । यस सन्दर्भमा जापानमा बसोबास गर्नुभएका विभिन्न देशका नागरिकहरुका अनुभवमा एक नजर राखौं ।
“जापानमा चाइनिज खाना वा पश्चिमी खाना लगायतका विभिन्न प्रकारका खानाहरुको विविधता रहेको छ । यदी तपाईहरु ठूलो शहरमा जानुभयो भने दुर्लभ विदेशी रेस्टुरेन्टहरु पाउनुहुनेछ । उदाहरणका लागि पेरू खाना, इथियोपियाली खाना, उज्वेकिस्तान खाना, इत्यादी । अवश्य त्यहाँ थुप्रै किसिमका फास्ट्फुड रेस्टुरेन्टहरु पनि रहेका छ्न् । तथापि, मेरो देशको खाना बनाउने रेस्टुरेन्टको स्वाद राम्रै छ । तर मुल्य अलि महङ्गो छ । त्यसैले मैले आवश्यक सामग्री किनेर आफै खाना बनाउने गर्छु । अनलाइन सपिंगसाइट मार्फत मेरो देशका स्पाईस्, मसलाहरु सजिलै प्राप्त हुन्छ”।
“जब म भर्खर जापानमा आएको समयमा मलाई धेरै गाह्रो भयो । ’cause जापानको खानाको स्वाद मलाई कतिपनि मन परेन । सुरुमा सुपरमार्केटबाट आवश्यक सामग्रीहरु किनेर मेरो देशको जस्तै खाना बनाउने गर्थे । जापानको जीवनशैलीमा घुलमिल भएपछि मलाई जापानिज खानाहरु पनि मनपर्न थाल्यो र दैनिक खाने गर्दथे । आफनो देशको खाना खान मन लाग्दा शहरमा रहेको मेरो देशको खानाहरु उपलब्ध हुने रेस्टुरेन्टमा गएर खाने गर्दथे । अनलाइनसपिंग वा सुपरमार्केटमा आवश्यक सामाग्री सबै उपलब्ध हुने भएकोले खानेकुरामा कहिल्लै पनि असजिलो महसुस भएको थिएन” ।
बिदाहरुमा कसरी समय बिताउनु हुन्छ ?
कोरोना भाईरसको महामारीको कारणले गर्दा अहिलेको समयमा कुनै ठाउँमा जान असजिलो वातावरण बनेको छ । तर, सामान्य स्तिथी भएमा जापानको आन्तरीक यातायात एकदमै उत्कृस्ट भएको हुनाले हवाइजहाज, रेल, एक्सप्रेस बस जस्ता माध्यमबाट छोटो बिदा भएपनि विभिन्न स्थानहरुमा जान सकिन्छ ।
मङ्गोलियाका Ms. Anarbayar Renchinkhorol भन्नुहुन्छ, “जापान विश्वकै एकदमै सुरक्षित देश हो, त्यसैले यहाँ महिलाहरु पनि निश्चिन्त भएर एक्लै जुनसुकै ठाउँमा यात्रा गर्न सक्दछन” ।
त्यसै गरी आफु बसेको नजिकैका ठाउँहरुमा फिल्महरु र सपिगंको आनन्द पनि लीन सकिन्छ । अर्को तर्फ, स्थानीय जापानी बच्चाहरुलाई क्रीकेट खेल्न सिकाउने, सांस्कृतिक आदानप्रदान कार्यक्रम वा खाराओके प्रतियोगिता जस्ता कुराहरुको आनन्द लिने व्यक्तिहरु पनि हुनुहुन्छ ।
फिलिपिन्सकी Ms. Annie भन्नुहुन्छ, “शनिबार र आईतबारका दिनहरुमा नजिकैका क्याफेहरुमा गएर आनन्द लिन्छु । त्यसैगरी डाउनटाउन क्षेत्रका पसलहरु घुम्ने, रेस्टुरेन्टमा खानाखाने लगायतका कुरा गर्न पनि मन पर्छ । स्थानीय महोत्सवहरु, चाडपर्व, प्रदर्शनी जस्ता समारोहहरुमा भागलिन रमाईलो लाग्छ । जापानी संस्कृतिको अनुभव गर्न सकिने जापानिज चिया अनुभव कार्यक्रम इत्यादीमा भाग लिनपनि एकदमै मन पर्छ । धेरै भ्रमण गरेर जापानका ४७ वटै प्रान्तहरुमा यात्रा गर्ने लक्ष्य राखेको छु” ।
जापानमा नर्स वा केयर गिभरको रुपमा कामगर्दा, नर्सिङ्ग सम्बन्धित विषयको अध्ययन र जापनिज भाषा अध्ययन गर्नुपर्ने हुँदा बिदाका दिनहरुमा पनि व्यस्त हुने गरिन्छ । तर विभिन्न तनावबाट छुटकारा पाउनका लागी बिदाका दिनहरुमा सक्रीय भएर बाहिर घुम्न निस्किएर जापानको आनन्द लिनु राम्रो हुन्छ ।
厚生労働省 令和2年度 外国人介護人材受入促進事業 Copyright (c) Since 2021 Japan Care Worker Guide All Rights Reserved.